UMKHUBA wokucofa iselula noma usethoyilethi, kwenza uhlale isikhathi eside esihlalweni sethoyilethi okuyinto engakubangela izinkinga zezempilo Isithombe: Men’s Health.com
Nonhlanhla | October 14, 2019
INDLELA abantu abangafuni ngayo ukuhlukana namaselula abo, ngisho beya endlini encane abawashiyi.
Abagcini lapho, nesikhathi abasichitha khona siba side njengoba besuke bengafuni ukusukuma bengangenanga ezinkundleni zokuxhumana, baphendule benze nokunye kwazise iningi alifuni kuphuthelwa okusuke kwenzeka ngaleyo mizuzu kulezi zinkundla.
Lokhu kuvele ocwaningweni lwakamuva olwenziwe wodokotela base-USA, abathole nokuthi ngabesilisa abachitha kakhulu isikhathi ethoyilethi besebenzisa amaselula. Kodwa abanye abacwaningi bathole nokuthi empeleni nabantu abamatasa kakhulu, bagcina behlala isikhashana emathoyilethi ngoba kusuke kuyisona sikhathi abasitholayo sokukwazi ukucofa cofa amaselula abo, babone nemiyalezo, bangene nasezinkundleni zokuxhumana.
Odokotela bayawukhuza lo mkhuba, bathi ukuhlala isikhathi eside esihlalweni sasethoyilethi kuza nobungozi njengoba ungazithola usuhlaselwa ngamaPiles, enza kube lukhuni satshe ukulahla itshe lentaba.
AmaPiles yizimila ezibuhlungu eziqaqela indawo okuphuma kuyo itshe lentaba.
Odokotela bathi lokhu kwenziwa wukuthi uma usuhlale isikhathi eside ethoyilethi, imithambo egelezisa igazi eliya ezinqeni iyagqilazeka bese ivuvukala. Uma lokhu kuhlale kwenzeka, imithambo igcina iqumba bese kuhlasela le nkinga.
UDkt Marc Leavey obehola lolu cwaningo lwakamuva olushicilelwe kwiphephabhuku lezindaba zezempilo, uthi bathole ukuthi amadoda ahlala imizuzu engu-35 ethoyilethi ngesonto. Okusho ukuthi ngosuku bahlala imizuzu engu-14.
Omunye ungoti oyiColorectal Surgeon, uDkt Karen Zaghiyan, uthi inkinga akukhona nje ukucofa iselula uma usethoyilethi kodwa ngokwenzeka emzimbeni wakho uma izinqe zakho zicindezele isihlalo sethoyilethi.
Nodokotela ozinze eMgungundlovu, uDkt Siboniso Thanjekwayo, uthi noma kungekho cwaningo aseke wafunda ngalo olweyamanisa ukuhlala ethoyilethi isikhathi eside nokusebenzisa iselula, kodwa akuqaphelile wukuthi yiningi intsha ehlaselwa yizimila ezinqeni kule minyaka uma eqhathanisa naseminyakeni edlule.
“Kulo nyaka nje uwodwa, ingaphezu kuka-20 intsha efike iguliswa amaPiles. Angisho ukuthi iyona yodwa kodwa isibalo sayo siphezulu,” usho kanje.
Ngaphandle kokuchitha isikhathi eside ethoyilethe, uThanjekwayo uthi zikhona nezinye izinto ezingadala le nkinga.
Ubale ukuhlale udla isinkwa esimhlophe njengenye yezinto engadala lezi zimila.
Nokuhlale uqunjelwe, okwenza ukhanule kakhulu uma uyolahla itshe lentaba nakho ukubale njengezinye zezinto ezingadala le nkinga.
Okunye ongakwenza uma usuvele unawo:
* Yeka ukuhlala kakhulu ethoyilethi
* Uma uzwa ukuthi itshe lentaba liyateleka ukuphuma, ungalikhanuli, yeka uzame ngesinye isikhathi
* Ungasebenzisa i-coconut oil uyigcobe endaweni ebuhlungu. Izokwenza ukuthi kwehle ukuvuvuka ikusize nokwehlisa ubuhlungu.
* Inhlaba (aloe vera) nayo isiza kakhulu ukwehlisa ukudumba nobuhlungu. Qaphela, ungavele uyikhe bese uyigcobisa njalo.
* Ungabeka amaqhwa endaweni ebuhlungu
* Phuza amanzi kakhulu, uqinise ekudleni okune-fibre uphinde ugqoke okwangaphansi okungakubambi kakhulu ukuze kuhlale kushaya umoya endaweni yokulahla itshe lentaba.
Okunye okumele ukunake:
* Njalo uma ukade ulahla itshe lentaba, lilunguze ulibuke ukuthi libukeka kanjani. Uma lintanta emanzini ethoyilethi noma lizika, kukhona into engalungile esiswini sakho.
* Bhekisisa umbala walo, uma liluhlaza kungenzeka futhi ukuthi kunokopha emathunjini akho, kumele uyokubika kudokotela.